Chris Gayle 215 Runs Video Highlights World Cup 2015
Chris Gayle Fastest Double Century Video vs Zimbabwe 2015 February 24, 2015 By tsmplay Leave a Comment Chris Gayle Fastest Double Century Video vs Zimbabwe Highlights 2015
Oh Dear its Chris Gayle once the player who is known for his hard hitting he performed well against the team of the Zimbabwe and score fastest 200 runs so far against any team in the World Cup 2015 . See how hard is Gayle on Zimbabwe bowlers no chance given by him in the World Cup game its an outstanding performance from player like him. After Scoring 200 runs against the team of Zimbabwe made him the first player in World Cup to score in double figures .
Chris Gayle Fastest Double Century Short Highlights (Full Available Soon):
He is out-form and he has not score that well in previous few games and this time he went on Zimbabwe bowlers and treat them with sixes and fours in the match . There are almost 16 sixes that he scored against the team of the Zimbabwe . It will be a good in-coming form for player like and he will be more destructive against India and others sides in left games of World .Now he become the highest run scorer in the world cup check out here (Link)
Chris Gayle Batting Record vs Zimbabwe ICC World Cup 2015
He is out in the end of the innings but he lead his side from the start to the end , its Chris Gayle made a largest Partnership with his team-mate Maron Samuels , they both scored 335 together in Partner-ship and breaks the record of Sachin Tendulkar and Rahul Dravid for most runs in a Partnership .